भोलिदेखि सेयर कारोबार खुला गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णय
१४ असार २०७७, आईतवार २०:४९
काठमाडौं / १४ असार
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमबारदेखि सेयर बजार खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले आवश्यक सुरक्षाका उपाय अपनाएर असार १५ गतेदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना महामारीका कारण गत चैत ११ गते लकडाउन सुरु भएसँगै बन्द भएको सेयर बजार वैशाख २ गते खुलेको थियो । तर दुई दिन कारोबार हुँदा नेगेटिभ सर्किट लागेपछि बजार फेरि बन्द गरिएको थियो ।
अब फेरि आवश्यक सुरक्षाका उपाय अपनाएर बजार खोल्ने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले सेयर ट्रान्सफर र रकम ट्रान्सफर गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।
नियमित कारोबार सञ्चालनका लागि कारोबार समय, सर्किट ब्रेक र मूल्य सीमासम्बन्धी व्‍यवस्था छिट्टै गर्ने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेप्से, सीडीएसी, मर्चेन्ट बैंकरले यसअघि बोर्डले जारी गरेको कोभिड-१९ सुरक्षाका उपाय पालना गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र बजार सम्बद्ध संस्थाले स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि नअपनाई कार्यालय खोलेको पाइए कारबाही गर्ने पनि जनाइएको छ ।
बोर्डले ब्रोकरहरुले पनि घरबाटै सेयर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भन्दै सकेसम्म घरबाटै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।त्यस्तै बोर्डले धितोपत्र बजार विकासका लागि लकडाउनको समयमा गरेको झण्डै एक दर्जन सुधारका काम गरेको जनाएको छ ।
असारे विकासमा सडकको अनावस्यक तडकभडक
पुर्वमन्त्री मोहम्मद ईश्तियाक राईद्धारा संसदीय विकास कोषको डेढ करोड रुपैयाँ भेरी अस्पताललाई दिने निर्णय
नेपालगन्जमा देशको उन्नति, समृद्धि र सुख शान्तिका (अल्लाह) ईश्वरसंग (जुमा)कादिन प्रार्थना
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १६:००
नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघ देशभरमै उत्कृष्ट
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १५:४४
जिल्ला अदालतले सफाइ दिएकाे सिद्धबाबा किन पुगे उच्च अदालतमा ?
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ०७:५०
कला शैली राष्ट्रिय समाचार
के साँच्चिके बैशाख ४ गते नायक कुमार माेक्तानसँग नायिका सीता थिङकाे विवाह हाेला त ?
२७ चैत्र २०७७, शुक्रबार २३:०८